एप्पलले अर्को 45 XNUMX करोड डलर निवेश गर्‍यो आईफोन समाचार
एप्पललाई थाहा छ कि तपाइँको उपकरणहरूमा चकनाचूर पार्नु र स्क्र्याच प्रतिरोधी गिलास राख्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। यसको स्पष्ट उदाहरण एप्पल वाच स्क्रिन हो। गिलास आयन-एक्स एल्युमिनियम मोडेल टायटानियम र स्टील मोडेलहरूमा नीलमणि पर्दा भन्दा सजीलो स्क्र्याच गर्दछ।
र बलियो स्क्रीनहरू प्राप्त गर्न, तपाईं निर्मातालाई मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ कर्निंग गिलास नयाँको विकासमा, अझ कडा क्रिस्टलहरू। तपाईंले भर्खरै आफ्नो अनुसन्धान प्रयोगशालामा $ 45 मिलियन लगानी गर्नुभयो।
मेरो पहिलो सक्कली एप्पल वाच (श्रृंखला ०) इस्पातको बनेको थियो नीलमणि। मैले उनलाई तीन वर्षको उमेरमा रिटायर गरें, स्क्रिन पूर्ण रूपमा पुरानो साथ। दोस्रो आयन-एक्स स्क्रीनको साथ एल्युमिनियमको बनेको थियो। यो लगाएको एक हप्ता भित्र, क्रिस्टल पहिले नै चिनो लगाइएको थियो। म धेरै स्पष्ट छु कि अर्को एक अविनाशी नीलमणि पर्दामा फेरि फर्कन, टाइटेनियम को बनेको छ।
यस साधारण उदाहरणको साथ पहिलो व्यक्तिमा रहँदा, यो सराहना गरिन्छ कि उपकरणको स्क्रिनको प्रतिरोध र पछाडि कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। एप्पललाई यो थाँहा छ, र यसको आपूर्तिकर्तालाई अधिक र अधिक गिलास सकेसम्म बढी पत्ता लगाउन मद्दत गर्दैछ प्रतिरोधी.
एप्पल केवल अन्य संग सब्सिडी 45 लाखौं डलर, तपाईंको प्रदर्शन आपूर्तिकर्ता कर्निंग ग्लास को अनुसन्धान र प्रयोगशाला। उनी लामो समयदेखि आईफोन, आईप्याड र एप्पल वाचको स्क्रिन निर्माण गर्ने जिम्मामा थिए।
कोषहरूको यो नयाँ इंजेक्शन "एप्पल उन्नत उत्पादन कोष" को अंश हो। यसको आपूर्तिकर्ताको आर एंड डी को लागी लगानी कोष। यसमा, कम्पनीले लगानी गर्‍यो 200 लाखौं २०१ 2017 मा डलर र 250 लाखौं अधिक २०१ 2019 मा।
यस प्रकारबाट आईफोन १२ को "सिरेमिक शिल्ड" गिलास प्राप्त भयो
यस लगानीको लागि धन्यवाद, एप्पल र कर्निंग ग्लासले नयाँ प्रकारको उच्च-शक्ति गिलासको विकास गर्‍यो, «सिरेमिक ढाल«, र त्यो यो पहिले नै सवारी भईरहेको छ आईफोन 12.
यो क्रिस्टलको साथ बनेको नयाँ प्रकारको गिलास हो नानोसेरामिक्स। यी प्रदर्शनहरू केन्टकीको Harrodsburg मा कर्निंगको प्लान्टमा निर्माण गरिन्छ। त्यसोभए हामी देख्नेछौं कि क्यापिटलको यो नयाँ इंजेक्शनको साथ, तिनीहरूले सिरेमिकले बनेको एप्पल वाचको लागि नयाँ स्क्रिन "आविष्कार" गर्ने छन्। यसले तपाईलाई धेरै राम्रो गर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » एप्पलले अर्को $ 45 मिलियन डलर कोर्निंग ग्लास आर एन्ड डीमा लगानी गर्दछ
स्क्रिन बन्द र आईफोनमा विज्ञापन बिना नै कसरी YouTube सुन्नुहोस्